ညီလင်း(နည်းပညာ): December 2014
သရဲတွေနဲ့တိုက်ခိုက်ရမဲ့ Gun zombie 2: Reloaded ---iOS Game--
သရဲတွေနဲ့တိုက်ခိုက်ရမဲ့ Gun zombie 2: Reloaded ---iOS Game--- လေးပါ iOS Phone user တွေက iOS Game ကောင်းလေးတွေတင်ပေးပါဆိုလို့ Gun zombie 2: iOS Game လေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ
ဘော်ဒါတွေ ဆော့ရတာ အဆင်ပြေပါစေ (ပုသိမ်အိုင်တီ)
Game description: Gun zombie 2: Reloaded
Gun zombie 2: Reloaded - city is flooded by zombies and it is time to clear the city of them! Guard important objects, protect the survived, hunt and kill walking dead! Find the epicenter of zombie virus.
More than 150 scenes
65 different zombies and powerful bosses
Arsenal of 20 realistic guns
50 randomly generated levels
Posted by androidlover at 3:54 AM No comments:
သရဲစာအုပ်ပေါင်း၄၀ကျော်ကိုapkတခုထဲနဲ့ ကြည့်နိုင်တဲ့ myanmar Ghost Story apk(သတိ-ကြောက်တတ်သူများမဖတ်ရ)
ဒီ Apk လေးကတော့ သရဲစာအုပ်တွေပေါင်းချုပ်ပြီး စုစည်းမှုအဖြစ်ထုတ်လုပ်ထားတာတဲ့ apkလေးပါ။ တခုတော့သတိပေးမယ်နော်-ကြောက်တတ်သူများလုံးဝမဖတ်ကြည့်ပါနဲ့သရဲစာအုပ်ပေါင်းကတော့၄၀ကျော် ပါဝင်ပါတယ်။ နှလုံးရောဂါရှိတဲ့လူများလုံးဝမဒေါင်းယူပါနဲ့။
Posted by androidlover at 3:44 AM No comments:
Pangu Tool ကို အသုံးပြုပြီး iOS 7.1.2 ကို Jailbreak လုပ်နည်း
Pangu untethered jailbreak က iOS 7.1, iOS 7.1.1 ကို jailbreak လုပ်နိုင်သလို Apple က ထက်မံ Update လုပ်ပေးလိုက်သော iOS 7.1.2 ကို လည်း အဆင်ပြေစွာ Jailbreak လုပ်နိုင်ပါတယ်
မိမိတို့၏ iDevices ကို passcode ထည့်ထားရင် jailbreak fail ဖြစ်တက်ပါတယ်။passcode ထည့်ထားပါက Settings -> General -> Passcode Lock On -> Turn Passcode Off လုပ်ပေးပါ။
Step 1: Pangu jailbreak for Mac or Windows ကိုအောက်လင့်တွင် Download ပါ
Posted by androidlover at 3:37 AM No comments:
Labels: ios jailbreak tool
Posted by androidlover at 9:12 AM No comments:
Androids များအတွက် မြန်မာ
အခြားသော Facebook မြန်မာ Apk တွေနဲ့ မတူပဲ ထူးခြားချက်ကတော့
အားလုံးနီးပါးမြန်မာလို့ မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာလို့ အသုံးပြုရတာကို ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့
ကျနော်ပေးတဲ့ Apk ကို ဖုန်းထဲ့ မှာ Install မလုပ်ခင် မိမိ တို့ ဖုန်းထဲ့မှာ အရင်သုံးနေတဲ့
Facebook Apk ကိုတော့ဖြတ်ပြစ်ရပါမယ်။ ဖြတ်ပြီးပြီးဆိုမှ ကျနော်ပေးတဲ့
မြန်မာဖေ့ဘုတ် ကိုစတင်ဖုန်းထဲ့ မှာ Install လုပ်ပြီးအသုံးပြုပါခင်ဗျာ။ အားလုံးဘဲအဆင်ပြေကြပါစေ။
DOWNLOAD MYANMAR FACEBOOK
Posted by androidlover at 8:24 AM No comments:
မြန်မာ Menu စနစ်ကို အသုံးပြုထုတ်လုပ်ထားတဲ့ မြန်မာ App ဖြစ်ပြီး မြန်မာပြည်က နာမည်ကြီး ရုပ်သံလိုင်းတွေနဲ့ ထိုင်းမှ ရုပ်သံ လိုင်းတွေ အားလုံးကို ဖုန်းထဲကနေ ကြည့်နိုင် တဲ့ ဆော့ဝဲလ် ဖြစ်ပါ တယ်။ မြန်မာ လိုင်းတွေကို အဓိကဖော်ပြပေးမှာ ဖြစ်တဲ့အပြင် Free TV လိုင်း၊ New Channel, ကာတွန်း လိုင်းနဲ့ တခြားသော ဗဟုသုတရဖွယ်ရာ လိုင်းတွေကို လည်း ရွေးချယ်ကြည့်ရှု့ နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ထို့အပြင် Myanmar Radio လိုင်းများလည်း တွဲဖက်ပါဝင်တာကြောင့် တကယ်ကိုအသုံးဝင်ပါတယ်။ HTV Myanmar က လိုင်းသိပ်မကောင်းတာတောင် လိုင်းအားနဲနဲလေးကြည့် ကြည့်ရှူ့ နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Playstore မှာလည်း Free ဒေါင်းယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ File Size က 2.5 MB သာ ရှိတဲ့အတွက် ပေါ့ပေါ့ပါးပါး အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ စိတ်ဝင်စားရင် အောက်မှာ ၀င်ဒေါင်းနိုင်ပါပြီ။
Posted by androidlover at 8:00 AM No comments:
Android Device သမားတွေ အတွက် မြန်မာ Android app ဆိုက်
Android ဖုန်း သမားတွေအတွက် မြန်မာ Android application တွေ ရယူနိုင်မယ့် ဆိုက်ကောင်းလေး တစ်ခုနော်။
Posted by androidlover at 7:54 AM No comments:
4.4.2 အထက် Samsung ဖုန်းအားလုံးကို ရုန်းလုပ်စရာမလိုပဲ မြန်မာစာဖောင့်ရပြီ။
2.3.6 မှ 4.4.2 အထိ Samsung ဖုန်းအားလုံးကို ရုန်းလုပ်စရာမလိုပဲ
Posted by androidlover at 8:14 AM No comments:
Android Version အမြင့်များကိုပါ ROOT နိုင်တဲ့ VRoot_1.7.8.7753 Setup (Latest Version)
ယနေ့မှအသစ်ထွက်လာတဲ့ Root master V Root လေးပါ V Root ဆို မသိသလောက်ရှားပါတယ် ဖုန်းအမျိုးပေါင်းများစွာကို ကလစ် တစ်ချက်နဲ့ ဖောက်နိုင်တဲ့ Root Tools ပါ
ဖုန်းတော်တော်များများဧ။် Android Version အမြင့်များကိုပါ ယခု အသစ်ထွက် VRoot (Latest Version) အသစ်က Root ပြုလုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
တို့ Huawei တို့ပေါ့ အဲကောင်တွေက ရစ်တယ်လေ bootloader unlock လုပ်ခိုင်းတယ် အဲကုဒ်ကိုလည်း ယူဖို့ ၂ ရက်လောက်
စောင့်ရသေးတယ် အဲဒါအချိန်တွေကုန်တယ် ဒီကောင်ကတော့ မိုက်တယ် one click ဘဲ ကျန် တာတွေမ လိုဘူးပေါ့။
နာမည်ကတော့ V root လို့ခေါ်တယ်ဗျ version က 1.7.8.7753 ပါအသုံးပြုမယ်ဆိုရင်တော့ VRoot_1.7.8.7753 ကိုအောက်က link မှာရယူနိုင်ပါတယ်။
Download Here (OR) Download Here (OR) Download Here
Posted by androidlover at 10:09 PM No comments:
Labels: root, ဆောဝဲ
Samsung ဖုန်း 4.2.2 နဲ အထက် Setting မြန်မာစာအားလုံး ထည့်ဖို့
Samsung ဖုန်းတွေရဲ့ Version 4.2.2 နဲ့အထက်ဖုန်းတွေကို Setting မှာ Myanmar Zawgyi မပါတဲ့ မိမိ တို့ဖုန်းတွေ တွက် မြန်မာစာ က ဖုန်း တစ်လုံး လုံးကို မြန်မာစာနဲ့ အသုံးပြုရမဲ့ မြန်မာ Apk တစ်ခု ဖြစ် ပါတယ်" သင့်ဖုန်းမှာ Root လုပ်ထားရပါမယ် Android Version 4.1.2 တွေ install လုပ်၍ မရနိုင်ပါ"
Samsung 4.2.2 ဖုန်း နဲ အထက်တွေမှာ install လုပ်၍ မြန်မာစာ အသုံးပြုနိုင်ပါသည်
ဖိုင်ဆိုဒ်က 1 MB သာ
Posted by androidlover at 9:53 PM No comments:
Android Phone/Tablet ကိုင်ဆောင်သူများအတွက် ဘောလုံးဝါသနားအိုးများပါမကျန် အကြိုက်တွေ့စေမဲ့
PES 2014 ဂိမ်း လေးကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ Direct Download လင့်များဖြစ်သည့်အတွက် ဒေါင်းလော့ဆွဲရ တာအဆင်ပြေစေမှာပါ။
・This application is for online usage only. Please use where Internet access is available.
・OS requirements: Android 2.3 or later
※Functionality cannot be guaranteed for Operating Systems and Devices that are not mentioned above.
※ myPES may not function correctly if there is insufficient memory and/or space on your device (due to hardware configuration).
・Please note that using the "Upload Stats" feature on devices with low-performance
hardware can hinder functionality.
apk ဖိုင်နဲ့ Data ဖိုင်ကို SD Card >> Android >>> ထဲ တွင် obb ဟု ဖိုင် တစ်ဖိုင်ဆောက်ပြီးထည့်သွင်းပါရန်။
လိုအပ်သည့်ဖိုင်များ အား ဒေါင်းလော့ဆွဲပါ
PES 2014 for Android apk (31.4 Mb)
data file (170 Mb)
Posted by androidlover at 9:35 PM 1 comment:
ကဲအခု နာမည် ကြီးနေ တဲ့ Galaxy S3 lock ဒီဇိုင်းကို သင်တို့ Android ဖုန်းမှာတင်သုံးလို့ရပါပြီ။
Galaxy S3 Lock HD
Google Play မှာဆိုရင် $0.99 တောင်းပါတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ free တင်ပေးလိုက်ပါတယ်
Posted by androidlover at 9:27 PM No comments:
Labels: launcher, software
AIS-lava -iris 700 ROOT လုပ်နည်းပြန်လည် မျှဝေ လိုက်ပါတယ်.... ပထမဆုံး...Kingo Root Tool...
ကို Download...ဆွဲ ပြီး ...မိမိ ကွန်ပျူတာ မှာ ( Run ) ထားပါ....Kingo ROOT ) version >>အသစ်ကို အောက်မှာ ဒေါင်းပါ....>>>>>
Kingo Android ROOT 1.2.4
Posted by androidlover at 3:54 PM No comments: